အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ရှေ့က ဘာလုပ်လုပ် နောက်က ဗိုလ်ချုပ်အဟောင်းတွေရော၊ အသစ်တွေရောကပါ ထောက်ခံနေရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်.. – စွယ်စုံသုတ
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ရှေ့က ဘာလုပ်လုပ် နောက်က ဗိုလ်ချုပ်အဟောင်းတွေရော၊ အသစ်တွေရောကပါ ထောက်ခံနေရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်..
စကစ ရှေ့က ဘာလုပ်လုပ် နောက်က ဗိုလ်ချုပ်အဟောင်းတွေရော၊ အသစ်တွေရောကပါ ဘာလို့ ထောက်ခံနေတာလဲ သိလား။
သူတို့ချင်း အဲလောက်ကြီး ချစ်နေ၊ စည်းလုံးနေတယ် ထင်လို့လား။ စစ်တပ်ရဲ့ အင်အားဟာ ဦးပိုင်ပဲ။ တပ်ဆိုတဲ့ formal ဖွဲ့စည်းပုံကို နောက်ကွယ်က business empire ကြီးနဲ့ ကျားကန်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့က strong ဖြစ်နေတာပဲ။
အဓိက အရင်းစစ်ရင် ပိုက်ဆံပဲ။ အဲဒီ ပိုက်ဆံက လူတွေကို သစ္စာရှိစေတယ်။ သူတို့က မေတ္တာနဲ့မှ အုပ်ချုပ်မရတာကိုး။ ဒီတော့ ငွေပေးပြီး သစ္စာခံခိုင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကို ဘဘကြီးက တမင်ချမှတ်ခဲ့တာ။
ဗိုလ်ချုပ်ရာထူး တခုရှိလာပြီဆိုရင် ဦးပိုင်မှာ ရှဲရာဝင်ရတယ်။ ဒါဟာ တပ်လို formal အဖွဲ့ကြီး မဟုတ်တဲ့အခါကျ လစဉ် dividended တွေ ပေးနေလို့ရတယ်။
လာဒ်စားတယ်လို့ မခေါ်နိုင်သလို‌ အောက်ကလူတွေလဲ complaint တက်လို့မရဘူး။ ဗိုလ်မှုး လစာ သိန်း ၅၀၊ အောက်ကဗိုလ် ၃ သိန်းဆိုရင် compaint တက်မှာပဲ။ တခုကျ company က အမြတ်ထုတ်ပေးတာဆိုတော့ သူ့လို share ရချင်ရင် ကိုယ်လဲ ကျွန်ခံပြီး ရာထူးတိုးပါစေ ဆုတောင်းတော့ပေါ့။
ဥပမာ၊ ကိုယ်က ဗိုလ်ရာထူးရာခံတခု ရလာတဲ့အခါကျ တလကို company က dividend အနေနဲ့ သိန်း ၃၀၀ ကိုယ့်ဘဏ်ထဲ ထည့်ပေးမယ်ကွာ။ အဲဒီ သိန်း ၃၀၀ ဆိုတာ ကိုယ့်မိန်းမ သားသမီးတွေ သုံးဖြုန်းကြမှာ မလား။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်က တပ်ကိုပဲ သစ္စာခံရတော့မယ်လေ။ တပ်တခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ်ရနေတဲ့ သိန်း ၃၀၀ မရတော့ဘူးလေ။
ဒီတော့ တပ်က လူတွေသတ်နေလဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မကျေနပ်လဲ အာမခံရဲတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဦးပိုင်ဟာ တပ်ရဲ့ အဓိက ထောက်တိုင်ပဲ။
အဲတော့ အဲလို အထက်ပိုင်း ဗိုလ်သစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေကို လစဉ် support ပေးနေဖို့ဆိုတာ ငွေတွေ အများကြီး လိုတယ်။ အဲငွေတွေကို ပြည်သူတွေဆီကပဲ ရနေတာပဲ။ တခြား တွင်းထွက်တို့ ရေနံတို့က ရတာတော့ ရှိမှာပါ။
သို့သော် ပြည်သူဆီက အစိတ်အပိုင်း အကြီးစားကြီး တခုရနေတာတော့ သေချာတယ်။ ဒီတော့ ပြည်သူတွေက ကိုယ့်ကို နှိပ်ကွက်ဖို့ တပ်ကို ကြားကန်ပေးမဲ့သူတွေကို ကြားကန်ပေးနိုင်အောင် ငွေတွေ ပေးနေတာပဲ။
စဉ်းစားကြည့်ရင် တော်တော်လေး ရင်နာဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒီ structure ကြီးကို ဘဘကြီးခေတ်ထဲက သိပါတယ်။ ဘိုင်ကောက်ကြဖို့လဲ ပြောပါတယ်။ လူတွေကိုယ်က လက်မခံကြတာ။ ခုလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။
ကဲ လူတွေက တပ်စီးပွားရေး အားလုံးကိုဘိုင်ကောက်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ရအောင်။ သေချာတာ ဦးပိုင် empire ကြီး ဝင်ငွေအကြီးအကျယ် ထိခိုက်မယ်။ ကျားကြီး ခြေရာကြီးမို့ operation cost နဲ့တင် ဝန်ပိပြီး အဘတွေကို လစဉ် မထောက်ပန့်နိုင်တော့ဘူး။
အဲဒီအခါကျ အဘ မိန်းမတို့ သားသမီးတို့က လစဉ် သုံးဖြုန်းနေတာတွေ မသုံးနိုင်တော့ အဘကို ပြန်ရစ်မှာပဲ။ ဒီတော့ သူတို့ကြားမှာ မအလ ကြီးက မမိုက်ပါဘူးကွာ၊
အာဏာ မသိမ်းရင် ငါတို့ အေးဆေး စားသောက်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဘုတော့မှာ။ အဲကျ မအလ ထောက်ခံမှု မရတော့ သူလုပ်ချင်တာတွေ အတော် တိုင်ပတ်သွားမယ်။
ကံကောင်းရင် သူ့ကို ဖြုတ်ချင်တဲ့သူ၊ NLD နဲ့ ပြန်ပေါင်းချင်တဲ့သူတွေ ပေါ်လာမယ်။ အခုလို အဘတွေကို လစဉ်ထောက်ပန့်နေတဲ့ ဦးပိုင် empire ကြီး ရှိနေသ၍ကတော့ သူတို့ တပ်တွင်းမှာ စည်းလုံးနေကြအုန်းမှာပဲ။ အားလုံးကို ငွေနဲ့ ချည်တုတ်ထားတာကိုး။ ဒါလေး နဲနဲလောက်တော့ စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။
crd-Saw Kyaw Thu
Tun. Tun. 🇺🇸
သုံးခွမှာ အောက်ဆီဂျင်လိုက်ရှာသူတစ်ဦး စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက် သေဆုံး
အဆိုတော်တေဇ MC ရဲ့ ဖခင် ဆရာဝန်ကြီး ရဲ့ လူနာတွေ အပေါ် ကွယ်လွန်သည်အထိ တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့ လေးစားစရာ စိတ်ဓါတ် >> ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ 😢🙏
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကိုတောက်ပစေမယ့် ခွေလေးတွေရဲ့...
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာ ရေးဆွဲသူအနည်းငယ်သာ ရှိတော့တဲ့...
ဘ ဝ မှာ အခက်အခဲတခုခု ကြုံလာ ရင် တနေ့ (၉) ပတ် စိပ်ပြီး...
နင္းျပားဘဝမွကုန္းထျခင္း ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ ျဖစ္ရပ္မွန္
“သာသနာ့ဘောင်သို့ ဝင်ရောက်တဲ့ အခါ ဆံချရခြင်း...